ESI EWEPU NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA VIDIYO - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala kaadị vidiyo
Onye ọ bụla nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nwere ike inwe ọnọdụ mgbe ọ dị mkpa iji wepụ ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ mgbe nile maka ntinye nke ọkwọ ụgbọala ọhụrụ, karịsịa ebe ọ bụ na kalịnda vidiyo nke oge a na-ewepu faịlụ ochie na ọnọdụ akpaka. O yikarịrị, ị ga-ewepụ ihe ochie ahụ na-eme ebe njehie na-egosipụta na ngosipụta nke ihe ọmụma. Ka anyị hụ n'ụzọ zuru ezu ka esi ewepụ ndị ọkwọ ụgbọala n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka kaadị vidiyo site na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.
Ụzọ ị ga-ewepụ ndị ọkwọ ụgbọala Kaadị Video
Biko mara na ọ dịghị mkpa ka ị wepụ ihe na kaadị vidiyo na-enweghị isi. Ma ọ bụrụ na mkpa dị otú ahụ, otu n'ime ụzọ ndị a ga - enyere gị aka.
Nzọụkwụ 1: Iji Onye nchịkọta ihe
Ngwa a ga - enyere gị aka iwepu faịlụ ọkwọ ụgbọala vidiyo. Site n'ụzọ, CCleaner nwekwara ike idebe ndekọ ahụ, hazie mgbatị ma wepụ usoro nke faịlụ nwa oge, wdg. Ngwakọta nke ọrụ ya dị oke mma. Na nke a, anyị ga-aga usoro a iji wepụ software.
Gbaa usoro ihe omume a. Anyị na-achọ ihe omume n'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ. "Ọrụ" dị ka ụdị ntụgharị ma pịa ya.
Anyị ga-anọ n'okpuru aka nri. "Wepu Mmemme". Na nri na mpaghara ị ga-ahụ ndepụta nke niile arụnyere na programmụ na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ.
Na ndepụta a, anyị kwesịrị ịchọta ngwanrọ kaadị vidiyo gị. Ọ bụrụ na ị nwere vidiyo vidiyo AMD, ị ga-achọ maka eriri AMD Software. Na nke a, anyị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala nVidia. Anyị chọrọ eriri "NVIDIA ndị ọkwọ ụgbọala ọhụụ ...".
Pịa na akara achọrọ nke bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe ahụ "Wepụ". Kpachara anya ka ị ghara ịbanye na akara. "Hichapụ"n'ihi na nke a ga-ewepụ ihe omume ahụ site na ndepụta nke ugbu a.
Mbido maka iwepụ ga-amalite. Mgbe sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ windo ebe ịkwesịrị iji gosi na i bu n'obi iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala nVidia. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Hichapụ" iji gaa n'ihu usoro ahụ.
Ọzọ, usoro ihe omume ahụ ga-amalite ihichapụ faịlụ faịlụ ntanetị. Ọ na-ewe minit ole na ole. Na njedebe nke nhicha ị ga-ahụ arịrịọ maka ịmalitegharịa usoro. A na-atụ aro nke a. Push bọtịnụ "Weghachite Ugbu a".
Mgbe nbudata usoro faịlụ ọkwọ ụgbọala, kaadị vidiyo ga-apụ.
Usoro 2: Iji ụlọ ọrụ pụrụ iche
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ngwanrọ kaadị vidiyo, ị nwekwara ike iji mmemme pụrụ iche. Otu ihe dị otú a bụ Display Driver Uninstaller. Ka anyị nyochaa usoro a site na iji ihe atụ ya.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye mmepụta nke usoro ihe omume ahụ.
Anyị na-achọ ebe akara na nseta ihuenyo, wee pịa ya.
A ga-akpọrọ gị gaa na ibe ebe ị chọrọ ịchọta akara "Official Download Lee» ma pịa ya. Njikwa faịlụ ga-amalite.
Nbudata ebudatara bu ihe ederede. Gbaa faịlụ a ebudatara ma dee ebe ị ga-ewepu. A na-atụ aro ka ị wepụ ọdịnaya dị na otu nchekwa. Mgbe mwepụsịrị, gbanye faịlụ ahụ. "Uninstaller ọkwọ ụgbọala ọhụụ".
Na windo na-egosi, ị ga-ahọrọ usoro mmemme usoro. Enwere ike ime nke a na listi adaala. Mgbe ị na-ahọpụta menu ahụ, ịkwesịrị pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka ekpe ala. Aha ya ga-adaba na ọnọdụ mmalite gị. Na nke a, anyị ga-ahọrọ "Ọnọdụ nkịtị".
Na window ọzọ, ị ga-ahụ data na kaadị vidiyo gị. Site na ndabara, usoro ihe omume ahụ ga-achọpụta na-emeputa ihe nkwụnye ahụ. Ọ bụrụ na o mehiere na nke a maọbụ na ị nwere ọtụtụ kaadị vidiyo arụnyere, ị nwere ike ịgbanwe nhọrọ na nhọrọ nhọrọ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ihe ndị dị mkpa. Ị nwere ike ịhụ ndepụta niile omume na mpaghara aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ. Dị ka akwadoro, họrọ ihe ahụ "Hichapụ ma reboot".
Ị ga-ahụ ozi na ihuenyo na-ekwu na usoro ahụ agbanweelarị Windows Update ntọala n'ụzọ dị otú a na ọ gaghị emelite ndị ọkwọ ụgbọala maka vidiyo na ọrụ a. Gụọ ozi ma pịa otu bọtịnụ "OK".
Mgbe ịpị "OK" Mwepụ ụgbọala na nhichapụ ndekọ ga-amalite. Ị nwere ike ịlele usoro ahụ. "Akwụkwọ"akara na nseta ihuenyo.
Mgbe ịmechara ngwanrọ, ọrụ ahụ ga-amalitegharịa usoro ahụ. N'ihi ya, ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ nke onye nrụpụtara ahọrọ ga-ewepụ kpam kpam site na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ.
Nzọụkwụ 3: Site na "Ogwe njikwa"
Achọrọ ịga "Ogwe njikwa". Ọ bụrụ na ị nwere Windows 7 ma ọ bụ ala, dị pịa bọtịnụ ahụ. "Malite" na nkuku aka ekpe nke desktọọpụ ma họrọ ihe na menu nke meghere "Ogwe njikwa".
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe Windows 8 ma ọ bụ 10 sistemụ arụmọrụ, mgbe ahụ ọ dị mkpa ka ị pịa bọtịnụ ahụ "Malite" Pịa aka nri na na menu ndapụta pịa na akara "Ogwe njikwa".
Ọ bụrụ na ị meela ka ngosipụta nke ọdịnaya nke panel nchịkwa dị "Atiya", gbanwee ya na ọnọdụ "Ihe ngosi nta".
Ugbu a, anyị kwesịrị ịchọta ihe ahụ "Mmemme na Ngwa" ma pịa ya.
Ihe ndị ọzọ na-adabere na onye bụ onye na-emepụta ihe ntanetị gị.
Maka kaadị vidio NVidia
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe video vidio na nVidia, lee anya maka ihe dị na listi ahụ. "NVIDIA Graphics Driver ...".
Pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ otu ihe. "Hichapụ / Dezie".
Nkwadebe nke ngwanrọ maka iwepụ ga-amalite. Nke a ga - egosi window nke nwere aha kwesịrị ekwesị.
Sekọnd ole na ole mgbe e kwusịrị nkwadebe, ị ga-ahụ windo na-arịọ gị ka ị kwado na mwepụ nke ọkwọ ụgbọala ahọrọ. Push bọtịnụ "Hichapụ".
Ugbu a, usoro iwepụ nvidia video adapter software amalite. Ọ na-ewe minit ole na ole. Na njedebe nke mwepụ ị ga-ahụ ozi banyere mkpa ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Weghachite Ugbu a".
Mgbe usoro akpụkpọ ụkwụ ahụ ọzọ, onye ọkwọ ụgbọala ahụ ga-efu. Nke a mezue usoro mwepụ nke onye ọkwọ ụgbọala. Biko mara na ọ dịghị mkpa iji wepụ ihe ọzọ nke ngwanrọ ntanetị vidiyo. Mgbe emelite onye ọkwọ ụgbọala ha ga-emelite, a ga-ehichapụkwa nsụgharị ochie ahụ na-akpaghị aka.
Maka kaadị AMD
Ọ bụrụ na ịnwe kaadị vidiyo ATI, wee na listi menu "Mmemme na Ngwa" anya maka eriri AMD Software.
Pịa na ahọrọ ahịrị na bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe ahụ "Hichapụ".
Ozugbo na ihuenyo ị ga-ahụ ozi ebe ịkwesịrị ikwenye na mwepụ nke software AMD. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Ee".
Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro iwepu ngwanrọ maka kaadị gị ga-amalite. Mgbe nkeji ole na ole, ị ga-ahụ ozi na-ekwupụta na ewepụla onye ọkwọ ụgbọ ala ma nwee usoro a ga-agbanyeghachi. Iji gosi, pịa bọtịnụ ahụ "Weghachite Ugbu a".
Mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, onye ọkwọ ụgbọala ahụ agakwaghị. Nke a mezighara usoro iwepu kaadị vidiyo na-eji mpaghara nchịkwa.
Usoro 4: Site na njikwa ngwaọrụ
Mepee njikwa ngwaọrụ. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Merie" ma "R" na keyboard n'otu oge ahụ, na window ahụ egosipụtara tinye iwu ahụdevmgmt.msc. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa "Tinye".
Na osisi ngwaọrụ, chọọ tab "Ihe ntaneti vidiyo" ma mepee ya.
Họrọ vidiyo vidiyo achọrọ ma pịa igodo ya na bọtịnụ òké aka. Na menu na-egosi, họrọ ihe "Njirimara"
Ugbu a gaa na taabụ "Ọkwọ ụgbọala" na n'elu ma na ndepụta dị n'okpuru anyị pịa bọtịnụ ahụ "Hichapụ".
N'ihi ya, ị ga-ahụ windo na-akwado njedebe nke onye ọkwọ ụgbọ ala maka ngwaọrụ ahọrọ. Lelee akara naanị na windo a ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro iwepụ onye ọkwọ ụgbọala nke ihe ntaneti vidiyo ahọrọ site na usoro ahụ ga-amalite. Na njedebe nke usoro, ị ga-ahụ ọkwa kwekọrọ na ihuenyo ahụ.
Biko rịba ama na ụfọdụ mmemme maka ịchọgharị ma na-emelite ndị na-akpaghị aka nwere ike iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa dị otú a na-agụnye Driver Booster. Ị nwere ike ịlele ndepụta zuru oke nke ụlọ ọrụ dị otú ahụ na weebụsaịtị anyị.
Dịka nkwubi okwu, m ga-achọ ịma na ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo gị, anyị na-akwado iji usoro nke abụọ. Iwepụ ngwanrọ site na iji Ngosipụta Unvealler Ngosipụta ọhụụ ga-enyekwa ohere dị ukwuu na diski ike gị.